Sajhasabal.com | Home‘कोभिड १९’– चीनबाट के सिक्ने ? - प्रा.डा.राजीव झाको अनुभव
प्रा.डा. राजीव झा:
“सरी है, चीनबाट साथीहरुको निरन्तर फोन आएकाले तपाईंहरुलाई कुराएँ” प्रा.डा. झा कुराकानीलाई अब तयार हुनुभयो । हामीलाई पनि जिज्ञासा भयो कोरोना विषयमा नै जान्ने । किनभने यतिखेर संसारका मानिसले सबैभन्दा धेरै खोजी गरेको र सुन्न चाहेको विषय कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने नै होला सायद । हामीले पनि यहीँबाट वार्ता शुरु गर्यौं- तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको अनुदान कस्तो हो ? यसबाट के गर्ने हो ?
चीनको उहानमा लकडाउन गर्दा पश्चिमाहरुले मानवअधिकारको विषय उठाएको भन्दै डा.झा भन्नुहुन्छ “वास्तवमा त्यो त मानअवधिकार भन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा गर्नका लागि लिइएको कदम थियो नि होइन ? हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालीमा पनि बडो वैज्ञानिक र पुरानो भनाइ छ नि महामारीमा ज्यान जोगाउनु भन्ने । आखिर महिनादिन भन्दा बढी नै लकडाउन भयो त्यसैले त थोरै क्षतिमै रोगमाथि विजय नै प्राप्त भयो नि होइन ? नत्र भन्नुस त के हालत हुन्थ्यो होला आज चीनको ? अमेरिकाले पनि यही गर्नुपर्थ्यो । खुल्ला समाजको परिचायक बन्न खोजेर मात्र हुँदैन, जुन देशको पनि पहिलो काम त आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउने नै हो भन्छु मत ।
प्रा.डा झा सरकारले केही अस्पतालाई तत्कालै डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बुमा रहेको अस्पतालाई डेडिकेटेड अस्पताल बनाएको छ । उहाँको सुझाव त बानेश्वरको सिभिल अस्पताललाई पनि एक डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा बनाउनुपर्ने भन्ने छ । भन्नुहुन्छ– यो सिभिल अस्पतालमा बढीमा १०० बेड छुट्याएर डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा घोषणा गरियोस् । किनभने यो सफा छ र खुल्ला ठाउँ पनि छ । यो चिनियाँको सहयोगमा बनेका अस्पताल हो र भोलि पनि सहयोग चीनबाट आउँदा यसमा आउँछ । अर्को कुरा भोलि नेपालमा यो महामारी भित्रियो र चिनियाँ सहयोग नै चाहियो भने पनि उनीहरुले आफ्नो मापदण्डअनुसार बनाएको यस अस्पतालमा आएर उनीहरुले काम गर्नेछन्, चीनलाई सजिलो पनि हुन्छ ।
नेपाल र चीनको बीचको मैत्री सम्बन्ध पनि पछिल्ला दिनमा झनै फैलिएको छ । राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङलाई लेखिएको पत्र त्यसैको उदाहरण भएको झाको भनाइ छ । सरकारी तथा गैरसकारी तहमा पनि राम्रो भातृत्व रहेको उल्लेख गर्दै झाले भन्नुभयो “हामीले आग्रह मात्रै गर्यौं भने चीनबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भइहाल्छ ।”